shahaado noocee ah ayay shirkadu heshay?
Uniwell waxa ay heshay SC, Ksoher, Halal, non-GMO, Import and Export Shahada, Shahaadada Kormeerka Badeecooyinka, Shahaadada Gaadiidka Xamuulka, iwm.
Hadda qorshee inaad hesho: ISO9001, HACCP, FSSC22000
2.Qaabka wax soo saarka
Maxaa alaab ah oo aad haysaa?
Uniwell Bio waxay qaadataa soosaar soybean ah iyo soosaaray cuspidatum polygonum sida alaabta keentay, soosaaray andrographis, soosaaray phellodendron, soosaaray epimedium, soosaaray saytuunka iyo alaabta kale ee faa'iidooyinka wax soo saarka ee Sichuan sida dheeri ah, wada jir ah si ay u sameeyaan qaab-dhismeedka wax soo saarka ee model dagaalyahan.
Wax soo saarkeena soosaar soybeanku waa balaadhinta iyo horumarka khibrada asalka ah, sidoo kale waxaanu nahay shirkadaha wax soo saarka soybean ee ugu weyn Shiinaha.Kooxda maamulka ayaa wax ka badan 20 sano oo wax soo saarka iyo iibka ah ee alaabta this.
Shuruudaha iyo Faahfaahinta Iskaashiga
1. Shuruudaha Lacag-bixinta, Isbeddelka Qiimaha
Waa maxay shuruudaha iyo hababka lacag bixinta ee aad taageerto iyo sababta qiimaha badeecaddu isu beddesho?
Tusaalooyinka & Dalabka Tusaalaha: Waxaan bixinaa muunado tijaabo ah waxaanan ku dallacaa shaybaarka tiro ka badan.Muunada la dallacay iyo dalabaadka muunada ayaa loo baahan yahay in la keeno ka dib lacag bixinta.
Iskaashiga Koowaad: Waxaan u baahanahay lacag-bixin horudhac ah iskaashiga ugu horreeya ee macaamiisha.
Macaamiisha muddada-dheer: Dalabka yaryar ee ka yar 1000 yuan, keenista waxa la samayn doonaa marka la helo lacag-bixinta.Macaamiisha muddada-dheer, waaxdeenna maaliyadeed waxay leedahay muddo xisaabeed kala sareyn ah, waqtiga ugu dheera ma aha in ka badan 90 maalmood.
Shuruudaha Lacag-bixinta: Waxaa jira khadad deyn oo kala duwan oo loogu talagalay macaamiisha kala duwan, guud ahaan 30-90 maalmood muddada xisaabtanka.
2.Baakadaha, Dekadda Shixnadda, Wareegtada Gaadiidka, Raadista
Sideed uga fogaan kartaa waxyeellada alaabtaada?
Xirmooyinka Caadiga ah: Durbaannada kartoonada ama baakadda durbaanka waraaqaha oo dhan, cabbirka durbaanka waa Ø380mm*H540mm.Xirmooyinka gudaha waa bac labanlaab ah oo caag ah oo leh xadhig cad oo caag ah.Shaabadda baakad ee dibadda waa shaabad rasaaseed ama shaabad cad oo hufan.Xirmada waxaa loo isticmaalaa in lagu qaado 25KG.
Cabbirka Xidhmada: Durbaan warqad oo dhan (Ø290mm*H330mm, ilaa 5kg)
(Ø380mm*H540mm, ilaa 25kg)
Durbaan giraanta birta ah (Ø380mm*H550mm, ilaa 25kg)
(Ø450mm*H650mm, ilaa 30kg ama alaabta cufnaanta hoose 25kg)
Kartoon (L370mm* W370mm* H450mm, ilaa 25kg)
warqad Kraft (ilaa 20kg)
Habka gaadiidka: 3 hab ee gaadiidka gudaha kuwaas oo ah saadka, degdega ah iyo gaadiidka hawada.Dariiqooyinka gaadiidka caalamiga ah waxaa loo mariyaa hawada iyo badda, inta badan laga soo qaado dekedaha Ningbo, Tianjin, Beijing iyo Shanghai.
Xaaladda kaydinta: Ku xidh heerkulka qolka meel ka fog iftiinka, shaqaynaysa 24 bilood.
Tallaabooyinka ilaalinta: Isticmaalka bacaha tolmada leh ee ka baxsan durbaanka ee gaadiidka guriga;Gaadiidka caalamiga ah oo isticmaalaya palette iyo filim fidsan.
Wareegga gaadiidka: Badda- Alaabta waxaa lagu ridi doonaa bakhaarka toddobaad gudihiis haddii ay jirto kayd, wareegga maraakiibtu wuxuu noqon doonaa ilaa 3 toddobaad;By Air- Sida caadiga ah duulimaadka waxaa la diyaarin doonaa todobaad gudahood ka dib markii la dalbado.
Ma taageertaa amarada OEM iyo intee in le'eg ayay tahay wakhtiga bixinta?
Tusaalaha keenista: Muunado joogto ah ka hor 3:00pm maalmaha shaqada waxaa la keeni karaa isla maalintaas haddii kale waxaa la keeni doonaa maalinta xigta.
Tusaalaha Tirada: 20 g/bac bilaash ah.
farsamaynta OEM: Waxaan aqbalnaa amarada alaabooyinka gaarka ah sida balaastig hooseeya, haraaga dareeraha hooseeya, PAH4 hooseeya, isoflavones soy benzoic acid hooseeya.Tirada ugu hooseysa ee benzoic acid soybean isoflavones waa 10KG wakhtigan xaadirka ah wakhtiga dhalmadana waa 10 maalmood.Alaabooyinka kale ee OEM waxay u baahan yihiin inay kala soocaan wareegga habaynta iyadoo loo eegayo alaabta.
Inventory: Soybean isoflavones, qiyaasta 5% - 90% ayaa dhammaan ku jira kaydka.Kaydka taagan waa: 5% 2MT, 40% 2MT, 40% plasticizer hoose 500KG, 40% dareere hoose oo haraaga ah 500KG, 40% PAH4 500KG hoose, 80% 200KG, 90% 100KG.
Waqtiga keenista: Alaabooyinka leh kaydka caadiga ah, wakhtiga keenista waa 2 maalmood.Alaabta aan wax kayd ah lahayn waxa laga yaabaa inay u baahdaan isku darka iyo wakhtiga tijaabinta, gaar ahaan meertada ogaanshaha microbial waa mid dheer, markaa sida caadiga ah wakhtiga dhalmada waa 7 maalmood.
4.Suuqyada waaweyn iyo shuruudaha suuqyada bartilmaameedka ah
Waa maxay suuqyada ugu muhiimsan ee alaabtaada?Ma buuxin kartaa shuruudaha suuqa?
Suuqyada Waaweyn: USA, Brazil, Belgium, Italy, Russia, France, South Korea, Vietnam.
Shuruudaha Suuqa Gobolka:
USA: Aan Irradiated, Aan GMO ahayn, haraaga dareeraha< 5000PPM.
Yurub: Non-Iradiation, non-GMO, PAH4<50PPB, haraaga dareeraha ah (methanol<10PPM, lama helin methyl acetate, wadarta guud ee haraaga dareeraha<5000PPM).
Japan iyo South Korea: Non-Irradiation, non-GMO, haraaga dareere ah<5000PPM, benzoic acid<15PPM.
5.Adeegga iibka kadib
Sidee shirkaddaadu u bixisaa adeegga iibka kadib?
Marka warshaddu ay ogaato in alaabtu aanay ahayn mid aan u qalmin ama aanay badbaado lahayn, Habka Maaraynta Dib-u-celinta Badeecada ee nidaamka maaraynta tayada ayaa la bilaabayaa.Marka macaamiishu ka soo horjeestaan ​​badeecada, is-baaritaan warshadeed ama tijaabinta qolo saddexaad ayaa la samayn doonaa si loo xaqiijiyo in alaabtu tahay mid aan badbaado lahayn ama aanay buuxin shuruudaha.Haddii badeeco cilladaysan la xaqiijiyo, u billow habka dib u soo celinta sida badeecad aan badbaado lahayn.Marka wax aan caadi ahayn laga waayo imtixaanka kooxda saddexaad, la xidhiidh macmiilka si aad u midayso habka imtixaanka oo aad uga xaajoodo arrimaha xiga.
6.Inventory, Capacity Supply
Waa maxay awoodda alaabtaada iyo agabkaagu?
Awooda farsamaynta sannadlaha ah ee Uniwell Bio waa 6,000 tan oo agab dawo ah oo ceeriin ah, badeecadaha iyo agabka la heli karo waxa lagu muujiyay shaxdan soo socota:
Awood-bixinta Sannadlaha ah
Soy isoflavones oo biyo ku milma 10%
Soosaarista Cuspidatum Polygonum
Waa maxay faa'iidooyinka shirkaddaada iyo meelaha ugu muhiimsan ee alaabtaada lagu iibiyo?
Soy isoflavones 5% - 40% Habka xalinta Brown jaale ilaa huruud khafiif ah <10 PPB <40 PPM
Soy isoflavones 80% Habka xalinta Cad-cad Methanol <10 PPM <20 PPM
Shirkadaha asaaga ah
Soy isoflavones 5% - 40% Habka xalinta Huruud khafiif ah Methanol 30-50 PPM 300-600 PPM
Soy isoflavones 80% Habka xalinta Cad-cad Methanol 30-50 PPM 100-300 PPM
2. Joogitaanka alaabta ceeriin
Sideed u xakameysaa tayada alaabta ceeriin?
Agabka ceyriinka ah ee shirkadeena dhamaantood waxa ay ka yimaaden aagagga soybean-ka ee aan GM-ka ahayn ee Heilongjiang, Shiinaha.Waxaan si joogto ah u tijaabin doonaa alaabta ceeriin waxaanan yeelan doonaa heerar tayo leh.
Alaabadaada ma yihiin kuwo aan hidde ahaan wax laga beddelin?
Soybeanku waa badeecada xasaasiyadda leh, waana in fiiro gaar ah loo yeesho kuwa aan GM-ka ahayn.Shiinuhu waxa uu soo dhoofsadaa 60% digirta soygiisa, badidoodna waa badeecado hidde ahaan wax laga beddelay (GM).Dhammaan alaabta ceeriin ee ay iibsatay shirkadeena waxay ka yimaaddaan soybeans-ka aan GM-ka ahayn ee deegaanka wax soo saarka ee Heilongjiang.Dhammaan alaab-qeybiyeyaasha waxay leeyihiin nadaamka aan-GM-ka ahayn (IP) waxayna ku aflaxeen shahaadada GMO-da.
Shirkaddayadu waxay sidoo kale dejisay nidaamka ku habboon, waxayna ka gudubtay shahaadada aan-GMO.
Waa maxay suuqyada ugu muhiimsan ee alaabtaada?
Suuqyada ugu muhiimsan: Maraykanka, Brazil, Belgium, Italy, Spain, Russia, France, Japan, South Korea, Vietnam iyo suuqa terminalka gudaha ee alaabta daryeelka caafimaadka.
5.Qaabka wax soo saarka
Waa maxay tilmaamaha taxanaha soybean?
Soybean isoflavones waxay u qaybsantaa wax soo saarka dabiiciga ah iyo alaabta synthetic, oo ka kooban yahay 5 ilaa 90%.
5% ilaa 40% Habka xalinta Brown jaale ilaa huruud khafiif ah <10 PPB <40 PPM
80% Habka xalinta Cad-cad Methanol <10 PPM <20 PPM
5% ilaa 40% Habka xalinta Huruud khafiif ah Methanol 30-50 PPM 300-600 PPM
80% Habka xalinta Cad-cad Methanol 30-50 PPM 100-300 PPM